Taariikhda My Butros » Ma Dating Online Wixii khasaaray?
Last updated: Jan. 23 2020 | 2 min akhri
Waxaa aafo ka socda bulshada maanta si degdeg ah Diinna — waxa aan dhamaan maqan kasta oo kale oo la our nolosha dad muhiim ah oo run ahaantii aan awoodin in ay ku xidhaysaa mafaatiix romantically. Maxaa ku dhacay maalmihii ugu fudud ee dugsiga sare markii ay ahayd in aan ku garaacday guys off naga mid ah ulo:)?
Well, xaqiiqadu waxa ay tahay meelaha qaar badan oo ka mid ah guys kuwa guursaday, dhaqaaqay dal kale, dambiga galay, ama ogaanay inay ahaayeen gay — si raadinta Mr. Xaqa waa ka adag tahay abid. Hoolka oo iskaabulo ah waxaa qaadan nidaan aad dhakhso badan noo abid-sax mudaysan.
Xaqiiqooyinkaas aad taag in wajiga – abid ka warrama isku dayaya shukaansiga online? Waa hab quruxsan fududahay in si weyn loo kordhiyo baaxadda pool shukaansigu dhawr qasabno of mouse ah.
Anigu hadda waan ogahay waxa aad ka fekereyso. Shukaansi Online qeylinayaa quus. Fursan. Loserville! Laakiin waxaan sidaas ma rumaysni. Iyo sababta waxaa ugu wacan in shukaansiga online leeyahay ka yimaadeen meel fog.
Waxaa ma aha tan madasha internetka qarsoodi ah u farabadan oo ka mid Tahay Beenaalayaasha iyo ragga is qaba si aad u hesho dhadig, iyagoo aan la ogayn in dhacana on. Ha – hadda si joogto ah, shaqeeya, kelida careysan yihiin raadinaya jacaylkiisa online oo ku guulaysanayso. Dhammaan kooxaha da'da. All jinsiyadaha. Diimaha oo dhan. Waxaa jira adeeg shukaansiga online for qof walba! Sidaas waxaa jira run ahaantii ma jirto sabab aan maan tijaabino.
Just a xeerar yar si aan u weyneyno waayo aragnimadaada…
1. In aad hesho qof aad la jaanqaadaan online macnaheedu ma aha inaad iyaga weli ogayn. Ula dhaqan xiriirka kasta oo dhan oo cusub online si taxadar leh oo dareen caadi ah.
2. Naftaada fasax inaad taas isku daydo caqligaaga oo furan. Haddii aad dareento guud oo ku saabsan waxa aad samaynaysid, oo waxay u iman doonaan guud ahaan marka aad nin oo la kulmay. Hel xaqa aad u leedahay maskaxda:)
3. U sheeg qof aad isugu dhow yihiin waxa aad samaynaysid iyo gaar ahaan haddii aad qaadato online-aragnimo offline. Ha u ogolaan in aad cabsi galin – laakiin sida taariikhda kasta – taxadaraya.
4. Marka aad la kulanto Mr. Right – heli offline! Naftaada ha ku dhibaateeyo by aan ogayn marka filan waa ku filan iyo in ay la idinka korraysaa.